हवाईजहाज यात्रामा अपनाउनुपर्ने सावधानी के के हुन् त ! – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
हामीकहाँ हवाईजहाज सर्वसुलभ छैन । त्यसैले यात्राको लागि सडक यातायातकै भर परिन्छ । अतः जरुरी अवस्था बाहेक धेरैले हवाई यात्रा गर्दैनन् । हवाई यात्रामा केहि सावधानी अपनाउनुपर्छ । खासगरी पहिलो पटक यात्रा गरिरहेकाहरुले हवाई यात्राका क्रममा गर्न हुने र नहुने कुरा जान्नुपर्छ । जस्तो कि, खानपान पनि ।
हवाई यात्राका क्रममा कतिपयलाई पेटसम्वन्धि समस्या हुनेगर्छ । यसको कारण हो, यात्रापूर्वको खानपान । उचाईंमा रहँदा पेट र पाचनतन्त्र ३० प्रतिशतसम्म फैलिन्छ । फलस्वरुप पेटमा दवाव पर्छ । यसले गर्दा यात्रा खल्लो हुनसक्छ । अतः यात्राका क्रममा भोजन यस्तो हुनुपर्छ, जो सुपाच्य होस् । अर्थात सजिलै पच्ने खालको होस् । यस्ता भोजनबाट चाँडै उर्जा प्राप्त हुन्छ र थकावट वा भारीपना महुसस हुँदैन ।
तुरुन्त उर्जाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो तरल कार्बोहाइड्रेट । यसले यात्रीलाई उडानको चिन्ताबाट टाढा राख्छ र सहज महसुस गराउँछ ।यात्राभन्दा अगाडि केही न केही अवश्य खानुपर्छ । यदि यात्रा गर्नुभन्दा २-३ घन्टा अगाडि केही खाइएको छ भने खाली पेट यात्रा गरेको भन्दा बढी सहज हुन्छ । तर, के खाने ? जान्नुपर्छ ।